Tag: codka oo kor u dhaafaya | Martech Zone
Waxaan la dhisnay xiriiro aad u wanaagsan dhowr hibood oo xagga codka ah sanadihii la soo dhaafay. Amanda Fellows waa mid ka mid ah hibada nooceeda, iyo sidoo kale Paul iyo Joyce Poteet. Hadday ahayd fiidiyow sharrax buuxa leh ama hordhac podcast ah, waxaan ognahay in helitaanka codka saxda ah ee ka sarreeya tayada ay saameyn aan caadi ahayn ku yeelatay tayada wax soo saarkeenna. Paul, tusaale ahaan, wuxuu lamid yahay magaalada Indianapolis. Waxa uu ka maqnaa raadiyaha, telefishanka, oo codka ayaa loo qabtay